Checkers 🥇 Emulator.online 🥇 🥇
Vakadzi.Chinangwa ndechekubata kana kuomesa zvidimbu zvemupikisi. Mutambi anokwanisa kudya imwe neimwe yezvidimbu zvemupikisi anokunda mutambo. Isu tinotaura nezve mumwe wemitambo yebhodhi inonyanyo kuzivikanwa uye inoridzwa papasi.
Mutambo weCheckers unotambwa pakati pevatambi vaviri, pane imwe bhodhi rekwere, yemakumi matanhatu nemana makwere neimwe mwenje nerima, iine gumi nembiri chena uye gumi nembiri zvidimbu zvidema.
Checkers: Maitiro ekutamba nhanho nhanho?
Kuti utambe macheki online zvemahara, iwe unofanirwa kudaro enderera mirairo iyi:
Ukangopinda saiti, mutambo unozoratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba uye iwe unogona ikozvino kutanga kusarudza iyo gadziriso yaunoda. Iwe uchagona kusarudza pakati pekutamba neshamwari, uye mushure mekusarudza iyo, iwe unozokwanisa kutanga kutamba mutambo.
Zvino, iwe unowana mamwe anobatsira mabhatani. Unogona "Wedzera kana bvisa ruzha ", ipa bhatani "tamba"Uye tanga kutamba, unogona"Mira zvishoma"Uye"Kutangazve”Panguva ipi neipi.
Tora anokumhan'arira kuti afambe asi zvidimbu.
Mushure mekuzadza mutambo, tinya pa "Kutangazve”Kutangazve.
Checkers mutambo: maficha
"Damas"mutambo webhodhi wakambovapo kwemazana emakore uye umo kubhejera kunoiswa neimwe nzira uye zvidimbu zvinogona kutorwa kubva kumuvengi. Unokunda kana mupikisi asisina zvidimbu kana kufambiswa zvekuti hazvichakwanise kufamba.
Chinangwa chemutambo "Checkers"
Chinangwa che "madzimai" ndeche bvisa kufamba kwemupikisi kana kubvisa zvidimbu zvakawanda zvekuti haachakwanise kufamba.
Nhamba yevatambi, zera uye nguva yekutamba:
Kubva pamakore 6
Chirongwa che chess
Zvimedu gumi nezviviri zvichena
12 zvidimbu nhema
Mitemo yakapusa uye, nekudaro, yakakodzera vatambi vadiki, asi zvakare inonakidza kune vakuru.
Nhoroondo ye "Ladies"
Chokwadi ndechokuti hapana anoziva chaizvo kuti mutambo wacho wakatanga riini kana munzira ipi, asi chii chiri chokwadi ndechekuti maLadies anga aripo kwenguva yakareba, kunyangwe zvakadaro Plato Akanyepa nezvazvo semutambo wakakweretwa neGirisi kubva kuEjipitori.
Pfungwa yekutanga ndeyekuti vhezheni yechinyakare yeCheckers yaive mutambo wakawanikwa mune yekuchera matongo mu Uri, Iraq. Carbon kufambidzana inoratidza izvozvo mutambo uyu waive uripo kwakatenderedza zviuru zvitatu BC.
Nekudaro, iyi inofungidzirwa yekutanga vhezheni yakashandisa bhodhi rakasiyana zvine hungwaru, huwandu hwakasiyana hwezvimedu, uye zvachose hapana anoziva kuti mitemo chaiyo yaive ipi.
MuEgypt yekare, mutambo unonzi Alquerque, iyo yaishandisa bhodhi re5X5, yaive mutambo une chekuita neyecheki uyo waive uchitambiswa zvakanyanya panguva iyoyo.
Vanyori vezvakaitika kare vakateedzera kwayakatangira kusvika 1400 BC uye vanoti mukurumbira wavo wakakura zvekuti yakatambidzwa mudunhu rese rekumadokero zviuru nezviuru zvemakore.
Around 1100 AD, mumwe murume wechiFrench aive nepfungwa yekutamba macheki pane chess board. Izvi zvaireva kuwedzera nhamba yezvidimbu kusvika gumi nembiri padivi rega rega. Iyi vhezheni itsva yakanzi "Vanotyisa"O zvakanaka"Ferses".
Munguva pfupi, maFrench akaonawo kuti kuita kusvetuka kunosungirwa kwakaita kuti mutambo uyu unetse uye vakafunga kufonera iyi vhezheni itsva "Jeu simba".
Shanduko yechinyakare yaionekwa semutambo wevanhukadzi uye yainzi "Le Jeu Plaisant De Dames" (Mutambo Unofadza weCheckers).
Kubva pamatafura kusvika kumakomputa
Nemitemo yeCheckers yakatsanangurwa neFrance, mutambo wakatumirwa kuEngland neAmerica, ichienderera mberi nekutonga kwayo pasirese. Muna G. Brittany, yakatumidzwa zita " Drafts "uye nyanzvi yemasvomhu William Payne akanyora chinyorwa chake pakubhejera gumi nemanomwe nemakumi mashanu nematanhatu. Zvisinei, pamusoro pemakore, Damas akachengetedza mukurumbira wayo.
Naizvozvo, maviri mafambiro ekufamba akagadziridzwa evatambi vane ruzivo, achivamanikidza kuti vatange mutambo nhando. Nhasi, kusvika pamabatiro matatu ekufambisa anoshandiswa mumakwikwi.
Vakadzi vakasvika pamasikirini emakomputa programmers kunyangwe isati yatanga Hondo Yenyika Yechipiri.
Kunyangwe makomputa aive mune yakaoma nhanho yekusimudzira, iyo yakajeka Alan Turing yakagadzira chirongwa chakakosha cheLadies icho chaida kuti kuverenga kuitwe papepa (nekuda kwekuti michina ichiri kutadza kuita basa racho).
Pakupedzisira, 1952 Yakanga iri gore rinoshamisa mune yakajeka nhoroondo yemutambo, apo Arthur L. Samuel akagadzira iyo yekutanga macheki chirongwa chinoshandiswa nekombuta. Zvishoma nezvishoma, zvirongwa zvemitambo izvi zvakagadziridzwa nekumhanyisa uye kugona kwemacomputer kwakawedzera.
Muna Chikunguru XNUMX, timu paUniversity yeAlberta inotungamirwa naJonathan Schaeffer vakazivisa kuti vagadzirisa mutambo wevaongorori.
Purogiramu Chinook , yakagadziriswa neiyo yakazara, yasvika padanho mukushanduka kwayo izvo zvakaratidza kuti hazvipfuure. Nenzira iyi, timu yakakwanisa kuratidza kuti maCheckers mutambo wekukweva, ndokuti, zvinogara zvichingoperera mukukwevera kana vese vapikisi vafamba nenzira kwayo.
Nekudaro, mutambo unochengetedza mukurumbira wawo, nevanhu vanobva pasirese pasi vachitamba maBhaibheri avo akasiyana kuti vafare, vachidzidzisa kufunga kwavo, kana kungonakidzwa neimwe nguva yemhando yekutamba nemhuri uye neshamwari.
Sei kutamba "checkers"?
Mumwe mutambi anowana zvidimbu zvichena, mumwe neumwe neumwe wezvidimbu zvidema: ndiani anotamba iwo ruvara, ivo vatambi vaviri vanogona kusarudza pakati pavo.
Izvo zvidimbu zvinozoiswa pamitsara yekunze kwebhokisi remutambo rakatarisana.
Nguva dzose uye mumamiriro ese ezvinhu tanga nezvidimbu zvidimbu.
Zvidimbu zvinogara zviri uye mumamiriro ese ezvinhu kuiswa mukati oblique nzira iyo munda wakatarisana kumberi. Kana paine dombo mumunda, harigone kugarwa, zvisinei nekuti rako kana ibwe remupikisi riri mumunda.
Kana iwe ukasangana nechikwere chinogumira neruvara dema nedombo rakatarisana, unogona kurisvetuka pane inotevera danho, chero bedzi sikweya iri kuseri kwedombo rakatarisana ichiri isina chinhu. Unosvetuka pazvidimbu zvinopesana uye ipapo unogona kuvatora kubva mumutambo. Kusvetuka nezvidimbu zvako kunorambidzwa. Iwe haugone kudzokera kumashure kunze kwemukadzi.
Kana iwe ukasvika iyo mutsara wepamusoro wemupikisi nedombo rako, the mutambi anogamuchira mambokadzi ndiani anogona kuita kubva pane ino mamiriro mune inotevera kutendeuka.
La nainen inoratidza kuisa zvidimbu zviviri chimwe pane chimwe. Kune izvi iwe unoda a piece izvo zvave zviripo kubviswa mumutambo.
Zvakanakira izvo ndizvozvo inogona kuita yakatarisana kumberi uye yakatarisana neshure zvine chisimba, ndiko kuti, iwe unogona kufambisa seakawanda masimi akatarisana kumberi kana kumeso kudivi sezvaunoda. Kubatanidza zvidimbu zvinopesana zvinoitika nenzira imwecheteyo. Mutambi mumwe nemumwe anowana huwandu hwakawanda hwamambokadzi. Kana iwe ukarasikirwa namambokadzi nekuda kwekushayikwa kwekutarisirwa, unogona kuwana mukadzi wechipiri.
Mutambi anova wekutanga kuita danho akarasikirwa.
Chii chiri chinangwa che "mukadzi"?
Iwe unofanirwa kutora yega uye yega yega yekumisidzana mafambiro emupikisi wako achirova kana kuvhara zvidimbu zvake.
"Dama" inowanikwa sei?
Kana mupikisi asisina mamwe mafambiro, iwe unokunda.
"Mukadzi" akakodzera kunaani?
Bhodhi mutambo "Daae" iri yakanangana nevatambi vanoda kuyedza hunyanzvi hwavo uye hunyanzvi hwehunyanzvi vari vaviri. Inova inozivikanwa kubva pamakore matanhatu.
Ndeupi mutengo we "Mukadzi"?
Zvichienderana nemugovera uye neshanduro, "Dame" inochinja pakati gumi euros yemitambo yakapusa uye 63 euros yemhando dzakanaka kwazvo.
Chii chakakosha kune "Mukadzi"?
Pazano, chiito chekuita, uye kufungisisa pamberi penguva kutanga zvitima zvine hungwaru.
Kurova neshure ne "Checkers" kunoregererwa here?
Ehe, kana iwe uchigona kunama, iwe unogona zvakare kunama kubva divi kune rimwe divi .
Mambokadzi asina kubata: mambokadzi anofamba achienda diagonally, achiyambuka nzvimbo dzisina chinhu dzaanoda, akatarisa kumberi kana akatarisa kumashure, asingatore chero chidimbu chemuvara wakatarisana munzira yake uye haakwanise kuchinja iyo diagonal.
Mambokadzi nekubata: kana paine chimwe chidimbu pane yako diagonal, matauriro emupikisi, kubata kunogona kuitwa chete kana paine imwe kana kupfuura nzvimbo dzisina chinhu kuseri kwechidimbu chemupikisi, kubata kunosungirwa. Mambokadzi haadiwe kuti aenderere saiti mushure mekakatorwa. Iyo inozivikanwa zvakare pasi rese, iri pakati pemitambo inozivikanwa kwazvo se: chess, checkers uye domino.
MaChinese Checkers ane nyeredzi nhanhatu-dzakatarisana dzakabatanidzwa nenzira ye gridhi. Iko kunopindirana mitsara, ndiko kuti, pamapoinzi, machipisi anoiswa. Chinangwa ndechekuti fambisa mataira gumi neshanu akatarisana nekona nyeredzi munzira yakanangana neiyi.
Mitemo yakafanana neiya yemadzimai echinyakare, neshanduko dzinotevera:
Iyo bhodhi yakaiswa panze nechena sikweya kuruboshwe.
Iwe haugone kugadzira vahosi.
Kana mutambi asingatore chidimbu kana zvichibvira, vanorasikirwa nemutambo.
Chaizvoizvo mitemo yakafanana neyetsika mataira, kunze kweizvozvo mutambi anogona kusarudza kubata chero chidimbu uye kwete yakanakisa sarudzo nekuzvisunga. Iyo chete mukana wamambokadzi pane yakajairwa chidimbu kugona kufamba uye kubata kumeso kumashure uye kumeso kumberi.
Shanduko chete kubva pamitemo yepamutemo inyaya yekuti kupfura hakumanikidzi uye nenyaya yekuti, kupfura kwakateedzana, kana chidimbu chikapfuura nemutsara wekupedzisira, chinosimudzirwa kuva mambokadzi uye chichaenderera. mutambo wacho samambokadzi.
Pamwe anonyanya kushamisa pane echinyakare vakadzi.
Shandisa iyo dashboard kasere kasere. Mutambi wega wega ane zvidimbu gumi nematanhatu uye anozviisa pakutanga mumutsara wechipiri newechitatu padyo navo.
Zvidimbu zvinofamba orthogonally, nedivi kana kutarisana kumberi, asi usinga tarise kumashure.
Iyo zvakare yakavharirwa yakatarisa kumberi kana kutarisana nemativi. Chidimbu chinobata chinowana pamwe chete kune iya yaimbogara nechidimbu chakatorwa, iyo inodzvanywa ipapo (mukufamba kwese, kwete pakupera kwayo chaizvo).
Kana chidimbu chasvika pamutsara wepasi anova mambokadzi.
Queens inogona kufamba seakawanda asina zvikwere sezvavanoda kutarisana kumberi, kutarisana kumashure kana kutarisana nemativi.
Kubata kunoitwa naMambokadzi zvakangofanana nezvidimbu zvakajairika, kunze kwekukwanisa kusvetuka nemutsara wemakwere asina chinhu kusvika wasvika pane chakatorwa.
Pese pazvinogoneka, Kubata kunosungirwa uye kunofanirwa kuitwa kubvisa zvidimbu zvemupikisi sezvinobvira.
Kukunda kunoitwa nekubata yega yega yega zvidimbu zvemupikisi, zvichimuregedza kana kumusiya aine, kazhinji, chidimbu chimwe chakanangana naMambokadzi.
Musiyano mune iyo mitemo yakafanana chaizvo nemutambo wepamutemo, asi mukusiyana uku, uyo anopera kuita zvidimbu anokunda. Mutambi, saka, anofanira kupa zvidimbu zvake kumuvengi nekukurumidza.
Mahofisi evakadzi emutemo
Vakadzi mutambo wepfungwa yakatambwa pakati pevanhu vaviri.
Nedudziro, vanhu ava ndivo vatambi.
3. Mutambo wevatambi inotambirwa pabhodhi rekwere, yakakamurwa kuita zana akaenzana mativi, zvimwe mwenje uye rima.
Inotambirwa mudzimba dzine rima, inonzi dzimba dzinoshingaira.
Mitsetse ye oblique yakaumbwa nenzvimbo dzerima idhagonali, iine huwandu hwese gumi nemashanu. Mutsara wakareba kwazvo wedhagonal uzere nemakwere gumi uye kujoina makona maviri ebhodhi, anonzi yakakura diagonal.
Bhodhi inoiswa pakati pevatambi, kuitira kuti iro rakakura diagonal ritange kuruboshwe kwemutambi wega wega, saka mraba wekutanga kuruboshwe kwemutambi wega wega wakasviba.
4. Bhodhi rakaiswa saka rine kutevera mazita:
Bases: mativi ebhodhi akatarisana nevatambi kana mahwendefa ekorona.
Tables: iyo mbiru dzepadivi.
Zvidyo: mitsara yakatwasuka ine mashanu matema mativi.
Makoramu: mitsara yakatwasuka iine mativi mashanu erima.
5. Nekokorodzano, nzvimbo dzakasviba dzinoverengeka kubva pa1 kusvika makumi mashanu (Manoury notation). Aya manhamba haazodhindwe patray. Tichitarisa kubhodhi kubva kumberi, iyo yakazara manhamba inotangira kubva kuruboshwe ichienda kurudyi, ichitanga pane yekutanga rima square pane yepamusoro crossbar uye ichizopedzisira kune yekupedzisira nzvimbo yerima pazasi repazasi (Dhizaini I).
Unogona kuratidza kuti:
Idzo dzimba shanu dzakasviba pamabheseni kana mahwendefa emakoroni anogamuchira nhamba dze 1 kusvika ku5 uye 46 kusvika 50.
Mabhokisi mashanu erima ari mumatafura, kana ekutanga uye ekupedzisira makoramu, akanyorwa nenhamba 6, 16, 26, 36 uye 46 kuruboshwe, uye manhamba 5, 15, 25, 35 uye 45 kurudyi.
Dzimba dzakasviba uye dzakanyanyisa pane iyo huru diagonal inonzi mabhodhi emakona.
6. Mutambo weInternational Checkers unotambwa nematombo makumi maviri machena kana akajeka uye 20 matema kana matema matema.
7. Mutambo usati watanga, iyo Matombo makumi maviri matema anotora zvikwere kubva pa20 kusvika pa1, nematombo machena kubva pa20 kusvika makumi mashanu. Zvikwere kubva 21 kusvika 30 zvichave zvemahara (Dhiagramu 2).
8. Chidimbu ndicho generic dhinominesheni rebwe uye mukadzi.
9. Zvichienderana nekuti idombo here kana kuti mambokadzi, zvidimbu zvinofamba uye zvinotora zvakasiyana maumbirwo. Kufamba kwekamuri kubva pane imwe imba kuenda kune imwe kunonzi "bidha".
10. Yekutanga kufamba inogara iri danho remuchena mutyairi. Vatambi vanochinjana kutamba nezvidimbu zvavo, kufamba kumwe panguva.
11. Dombo rinofanira kuenda mberi, mu diagonal, kubva paimba painosara kuenda kuimba yemahara mune inotevera nzira.
12. Dombo rakasvika pakorona yekorona rikaramba riripo pakupera kwekufamba rinokurudzirwa kuva mambokadzi. Iko kuiswa kwekona kwedombo kunoratidzwa ne kupindirana rimwe dombo rine ruvara rwakafanana.
13. Zvinokurudzirwa kuti anopikisana naye kupfeka uku kugadzwa.
14. Dombo rinotyairwa nemadzimai rinochengetedza hunhu ihwohwo, asi haikwanise kufamba isina kuvezwa korona.
15. Mambokadzi achangopfekedzwa korona anofanira kumirira kusvikira anopikisana atamba kamwe chete asati aita.
16. Mambokadzi anogona kubva kune rimwe divi achienda kune rimwe, kubva pamba paanoiswa kune chero imwe, yesarudzo yake, pane diagonal yaanogara kuenda kwaanosununguka.
Kufambisa kwechimedu kunoonekwa kunge kwapera kana mutambi aiburitsa mushure mekuifambisa.
Kana mutambi ari kufamba akabata chimwe chezvimedu zvake zvekutamba, anosungirwa kuchisimudza.
Kana iro dombo rakabatwa kana kufambisa risati rasunungurwa, rinobvumidzwa kuti riiswe mune imwe imba, kana zvichibvira.
Iye mutambi ane danho uyo anoda kunyatsoisa chimwe kana zvimwe zvidimbu pabhodhi anofanira, asati adaro, anodzivirira zvakajeka anopikisa neshoko rekuti "AJEITO".
17. Kutora zvidimbu zvinopesana kunosungirwa uye kunoitika zvese kumberi uye kumashure. Pfuti izere inoverengwa sekutamba kumwechete kunotamba. Zvinorambidzwa takura zvidimbu zvacho.
18. Kana dombo rikasangana, rakabatana, riine chidimbu chakatarisana, mushure mezvo pane nzvimbo isina chinhu pachiyero chimwe chete, unofanirwa kusvetuka chidimbu uye kutora nzvimbo yemahara. Chidimbu chinopikisa chinobviswa mubhodhi. Uku kushanda kwakakwana, uko kunogona kuitwa kumberi kana kumashure, ndiko kupfurwa kwakaitwa nedombo.
19. Kana mambokadzi nechidimbu chakatarisana vari pa diagonal imwechete padyo kana kure kubva kune mumwe nemumwe uye panenge paine imwechete nzvimbo isina chinhu kuseri kwechikamu chakatarisana, mambokadzi anofanira kupfuura pamusoro pechikamu chakatarisana otora chero nzvimbo yemahara mushure mechidimbu, kuda kwako. Kuvhiya kwakadai kunoitwa nemukadzi.
20. Nzvimbo yekubuditsa inofanira kuitwa zvakajeka uye nenzira kwayo. Kushaikwa kwechiratidzo chakajeka chepfuti kwakaenzana nechikanganiso chinofanira kugadziriswa pachikumbiro chemupikisi. Iko kutora kunoonekwa kunge kwapera mushure mekubviswa kweganda kana zvinopesana zvikamu.
21. Kana dombo rawakatora rakabatana riri pasi nechidimbu chakatarisana, kuseri kwaro kune nzvimbo isina chinhu, chidimbu chechipiri chinofanira kusvetuka, kwozoti chetatu zvichingodaro, kutora nzvimbo yemahara mushure meiyo yekupedzisira. famba. Zvimedu zvemupikisi zvakatorwa kudaro, mushure mekupedza kufamba, akabva abviswa mubhodhi mukukwira kana kudzika odha. Kuita kwese uku kunodaidzwa kuti cheni yakapfurwa inoitwa nedombo.
22. Kana mambokadzi, kana achitora, mushure mekusvetuka kwekutanga, ari pane imwechete diagonal, padyo kana chinhambwe, kubva kune rimwe ibwe rakatarisana, riripo kuseri kwezvikwere izvi kana zvimwe zvisina chinhu, mambokadzi anofanira kupfuura chikamu chechipiri ichi, obva apfuura chetatu zvichingodaro uye inotora nzvimbo yemahara, pane yako sarudzo, mushure mekupedzisira chakabatwa chidimbu.
Zvimedu zvemupikisi zvakatorwa kudaro, mushure mekupedza kufamba, akabva abviswa mubhodhi mukukwira kana kudzika odha. Uku kuvhiya ndiko kuketwa neketani kunoitwa nemukadzi.
23. Muketani pfuti zvinorambidzwa svetuka dzimba.
24. Pane ketani pfuti, iwe unobvumidzwa kupfuura nepakati isina chinhu kanopfuura kamwe, asi chidimbu chinopikisa chinogona kungosvetuka kamwe chete.
25. Cheni pfuti inofanira kuurayiwa zvakajeka, chidimbu nechidimbu, kusvetuka nekukwakuka, kudzamara nzvimbo yekupedzisira yasvika Kushaikwa kwechiratidzo chakajeka chepfuti kwakaenzana nechikanganiso chinofanira kugadziriswa pachikumbiro chemupikisi.
Kufamba kwechimedu panguva yeketani kupfurwa kunofungidzirwa kupera kana mutambi yadonhedza chidimbuKana kumagumo kana pakati pekufamba.
27. Zvidimbu zvakatorwa zvinogona kubviswa chete kubva mutray mushure mekupfura kwecheni kwapera zvizere. Zvidimbu zvakatorwa vanobviswa nekukurumidza panopera kufamba uye mukukwira kana kudzika kwechirongwa chavakasvetwa,
Pasina zvinokanganisa. Kubviswa zvisina kukodzera kwezvidimbu zvakatorwa kwakaenzana nechikanganiso chinofanirwa kugadziriswa pachikumbiro chemushori.
28. Kubviswa kwezvidimbu kunofungidzirwa kwakakwana kana mutambi achibvisa zvekupedzisira zvezvidimbu zvakatorwa kana kana iyo kushanda kuuraya kwakamira.
Kutora zvidimbu zvakawandisa muketani chinosungirwa. Mukushandisa mutemo uyu, mambokadzi haakoshese kana kumanikidza chero chisungo. Mupfuti, mukadzi nedombo vari pamakumbo akaenzana.
30. Kana zvidimbu zvichizotorwa, nenzira mbiri kana kupfuura, zvakaenzana muhuwandu, mutambi akasununguka kusarudza chero cheizvi mukana, kungave nedombo kana mambokadzi, mukubata kamwe chete kana kwakawanda.
31. Yakasimbiswa pa Chisungo 3.5, ibwe iro muketani rakapfura rinongopfuura nepakati pedzimwe dzimba dzeakatarisana nekorona crossbar, pakupera kwekutora richiri ibwe.
32. Kana panguva yemutambo zvakaonekwa kuti bhodhi rakaiswa zvisizvo, tichifunga chinyorwa 2.4, mutambo unofanirwa kudzimwa uye kutangwazve.
33. Zvipo zvechinyorwa 2.8 inofanirwa kusimbiswa mutambo usati watanga. Chero kusanzwisisika kunowanikwa panguva yemutambo kunogadziriswa sechinyorwa 5.4.
34. Chero chidimbu chiri munzvimbo isina basa (yakajeka) haina basa uye inogona kupedzisira yadzoswazve mukuita zvinoenderana nechinhu 5.4.
35. Kana mutambi akaita chimwe chezvinhu zvisina kufanira zvinotevera, anopikisana chete une mvumo yekuona kuti kukanganisa kwacho kunogadziriswa here kana kuchengetedzwa. Kukanganisa:
36. Tamba mafambiro maviri akateedzana.
37. Ita zvisina kufanira kufamba kwe ibwe kana mukadzi.
38. Ridza zvako wega zvidimbu uye tamba imwe.
39. Dzokera shure imwe mujaho wapera.
40. Ridza chidimbu chemupikisi.
41. Ridza chidimbu apo zvinokwanisika kutora.
42. Bvisa zvidimbu zvemupikisi kana muridzi webhodhi pasina chikonzero.
43. Tora nhamba yakaderera kana yepamusoro yezvidimbu kupfuura zvinotarwa nemutemo.
44. Mira pamberi pekupera kwecheni yekumisa.
45.Bvisa chidimbu cheplate, chisina kugadzirwa, plug isati yapera.
46. ​​Bvisa, mushure mekubatwa, pasi pehuwandu hwezvimedu zvakatorwa.
47. Bvisa, mushure mekubatwa, zvikamu zvisina kutorwa.
48. Mira kudhonza zvikamu paketani socket.
49. Mushure mekubatwa, bvisa chimwe kana zvimwe zvezvikamu zvako.
50. Kana, nekuda kwechikonzero chakangoitika, pane shanduko kana kubvisa chinzvimbo mukutamba, chokwadi ichi, chakasimbiswa panguva iyoyo, hachigone kutariswa sekusaenzana.
51. Kana mutambi akaramba kutevedzera mitemo yepamutambo, anopikisa ane mvumo yekuishandisa.
52. Chero kufamba kunoitwa nemupikisi wemutambi akanganisa zvisina kufanira kana anoramba kuendesa kumitemo yepamutambo yemutambo zvakaenzana nekutambira mamiriro acho. Nenzira iyi, kodzero yekugadzirisa inoguma.
53. Kugadziriswa kwechikamu che a kusagadzikana kana kudarika.
53. Mutambo unoonekwa sewe dhirowa apo chinzvimbo chimwe chete chinoratidzwa kechitatu uye mutambi mumwechete ndiye anofambisa kufamba.
54. Zvinosimbiswa kuti panguva 25 inoteedzana mafambiro, cheki chete mafambiro akaitwa, pasina kutora kana kufambisa ibwe, mutambo unoonekwa sewakakweva.
55. Kana pasina zvidimbu zvinopfuura zvitatu, zvidimbu zviviri uye dombo rimwe, chidimbu chimwe nematombo maviri chakanangana nechidimbu, chekupedzisira chichaonekwa setayi mushure memakumi gumi ekufambisa.
66. Kupera kwevahosi vaviri, mambokadzi uye dombo kana mambokadzi kupokana namambokadzi, inoonekwa seyayi mushure mekupfuura kwashanu kufamba.
77. Mhedzisiro yemutambo ine mibairo miviri:
Kukunda kune mumwe wako, uye nekudaro kukundwa kweimwe.
Sunga kana pasina mutambi anokwanisa kuhwina.
78. Mutambi anokunda kana anopikisana naye:
Uine kufamba, haugone kutamba.
Iwe warasa zvidimbu zvese.
Inoramba kutevedzera mirau.
79. Tayi inoitika kana:
Vafambidzani vanozvizivisa kuburikidza nekubvumirana.
Kushandisa izvo zvinopihwa muchinyorwa 6.
Kana pasina mutambi anogona kuhwina.
80. Nokubvisa nhamba kubva pa1 kusvika pa50, zvinoenderana nechinyorwa 2.6., Zvinogoneka kucherechedza mafambiro ezvidimbu, kufamba nekufamba, zvese mutema nemuchena, vachinyora mutambo wese.
81. Iko kunyorwa kwechikwata kunofanirwa kuitwa seinotevera:
Nhamba yekutanga yeimba yechikamu ichiteverwa neinotanga imba nhamba yechikamu.
Idzi nhamba mbiri dzinoteverwa nedash (-) kuitira kufamba kuri nyore.
Mukana wekutora manhamba vanozopatsanurwa ne (x).
82. Kuti uwane chirevo chakajeka, zviratidzo zvinotevera zvinoshandiswa kuratidza:
Yakatamba zvakanaka kana kufamba kwakasimba:!
Yakanakisa kana yakasimba kwazvo kupihwa: !!
Kuneta kana kupihwa kwakashata 😕
Yakanyanya kusimba kana murombo kupa:??
83. Zvinogona kubvumidzwa kuti mumutambo mutambi mumwe nemumwe anosungirwa ita imwe nhamba yekufamba mukati meimwe nguva.
84. Panyaya iyi, vatambi vanofanira:
Pfeka wachi yakakosha yemakwikwi.
Rekodha kufamba mushure mekufamba, Zvese zvitema uye zvichena, iyo yakazara kosi yemutambo.
85. A nguva muganho wemutambo wese.
86. Panyaya iyi, kushandiswa kwewatch yemakwikwi kunosungirwa, asi chinyorwa hachidiwe.
87. Kupfeka wachi inotongwa nemirau nemirau yemakwikwi.